BACHAN TV – Page 101 – Bachan Tv
अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यका हाउस अफ डेलिगेट जोन जो बेलद्वारा नेपाली संगीतमा ख्यातीप्राप्त प्रसिद्ध गायिका अन्जु पन्त सम्मानित हुनु भएको छ । इन्टरनेसनल नेप्लीज् आर्टिष्ट सोसाइटी (इनास अमेरिका) ले भर्जिनियामा आयोजना गरेको एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा भर्जिनिया राज्यका डेलिगेट बेलले नेपाली समुदायमा गायिका पन्तले पु¥याउनुभएको योगदानको कदर गर्दै सम्मानित गर्नुभएको हो । अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली समुदायप्रति अत्यतै सकारात्मक रहेको र नेपाली संस्कृति र संगीतलाई बचाइराख्नु भएकोमा खुसी लागेको कुरा डेलिगेट जोज जे बेलले कार्यक्रममा बताउनु भयो । यो अवसरमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएको र अन्जु पन्त जस्तो ख्यातीप्राप्त नेपाली गायिकालाई सम्मान गर्न पाएकोमा आफु अत्यन्तै खुसी भएको भन्दै इनास अमेरिकालाई धन्यवाद् ब्यक्त गर्नु भएको थियो । नेपाली संगीत इतिहासमै पहिलो पटक अमेरिकी राज्यका डेलिगेट र सिनेटरबाट गायिका अन्जु पन्तलाई यसरी सम्मानित गर्न पाउँदा इनास अमेरिकाले गर्व महसुस गरेको कुरा अध्यक्ष आनन्दु लामाले बताउनु भयो । नेपाली संगीतकी स्वर सम्राज्ञी अन्जु पन्तलाई अमेरिकी सरकारी निकायबाट यसरी सम्मान प्राप्त हुनु भनेको सम्पूर्ण नेपाली संगीत जगतको नै सम्मान भएको कुरा बताउनु भएको भन्दै आगामी दिनमा नेपाली कलाकारको उचाइ बढाउने काममा लागिरहेन इनास भर्जिनिया च्याप्टरका अध्यक्ष गोविन्ददास श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
सम्मानित भएपछि गायिका अन्जु पन्तसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, मैले सोच्दै नसोचेको सम्मान अमेरिकी सरकारबाट पाएकोमा आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु । यो सम्मान मेरो मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीको सम्मान भएको र यसबाट आफुमा अझ ठूलो जिम्मेवारी थपिएकोे साथै आउने दिनमा नेपाली गीत संगीतलाई विश्वभरि फैलाउने कुरामा लागिरहने गायिका पन्तले बताउनुभएको छ । सम्मान प्रदान गर्नु भएकोमा अमेरिकी सरकार, भर्जिनिया राज्य र सिनेटर जेनीफर वेक्सटन, डेलिगेट जोन जे बेल प्रति धन्यवाद् ब्यक्त गर्नु चाहन्छु, पन्तले भन्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा सिनेटर जेनिफर वेक्सटन, सिनेटर मार्क वार्नर नेपाली महाबाणिज्यदुत तथा बरिष्ठ गायक प्रेमराजा महत, डेमोक्र्याटस राजनितिज्ञ हरि शर्माको समेत उपस्थित रहेको थियो ।
उहाँँले दिनुभएको आवाज उहाँँको कामको निम्ति समर्पण गरेको छु ।
स्व. हर्कबहादुर गुरुङ र आमा हर्कमाया गुरुङका कान्छा छोराको रुपमा २०३८ सालमा जन्मनु भएका गायक÷आरजे तारजन गुरुङ थियो । श्रीमती पिंकी र लोल्सि गुरुङ साथमा काठमाडौंमा स्थायीरुपमा बसोवास गर्नुहुन्छ । १४÷१५ वटा गीत रेकड गराई गीति एल्वम निकाल्नु भएका गायक केही गीतले निकै चर्चापरिचर्चा पाएको छ । “हाम्रो यो जीवन घाम छाँया मात्रै हो” साथै रुर्दा रुदै वित्यो मेरो आदि जीवन” जस्ता गीत धेरै स्रोताहरूले मन पराइ सक्नुभएको छ । साथै उहाँँ इसाई गुड न्युज एफ एममा ७ वर्षदेखि कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । उहाँँसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश प्रस्तुत छ ।
कहिलेदेखि गीत आउन सुरु गर्नुभयो ?
स्वर राम्रै छ भनेर सबैले भन्थे त्यही भएर गाउन सुरु गरेको थिए । प्रभुमा आएपछि अब बाचुन्जे प्रभुको निम्ति गाउँछु भनेर गीतसंगीतमा अगि बढिरहेको छु । उहाँँले दिनुभएको आवाज उहाँँको कामको निम्ति समर्पण गरेको छु ।
इसाई कुनै गायक गायिकाको आवाजले प्रेरणा मिलेको छ ?
गायिका सलोमी तिमोथी र विज्ञान रसारेलीको आवाजले प्रेरणामा मिलेको छ । उहाँँको आवाजले प्रभुमा निकै नजिक भएको महशुस गराउँछ ।
कस्ता गीत संगीतले प्रभुको नजिक पु¥याउन सहायता गर्छ ?
परमेश्वरको बारेमा बनाएका लेखिएका गीत संगीतले नै हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा पु¥याउँछ । आज धेरै यस्ता गीतसंगीत हामी पाउन सक्छौं जुन गीतसंगीत सुनेर मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन् ।
गुड न्युज एफ एमबाट कुन कुन कार्यक्रम
गर्दै हुनुहुन्छ ?
चार–पाँचवटा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छु । आज गुड न्युज एफ. एम. सुममाचार सुनाउने राम्रो माध्यम भएकोले उहाँँले दिनुभएको आवाज गीत गाएर र कार्यक्रमबाट बोलेर उहाँँको आज्ञालाई पूरा गरिरहेको छु । ब्गमष्य द्यष्दिभ मा पनि आवाज दिएको छु । जुन बाइबल पढ्न नसक्ने र बोल्न नसक्नेको लागि अति उपयोगी छ ।
कसरी प्रभुमा आउनु भयो ?
दिदी भिनाजुको माध्यमबाट मैले प्रभुलाई पाएको हुँ । उहाँँहरू प्रभुमा पुरानो हुनुुहुन्छ । उहाँँको जीवन देखेर साथै ख्रीष्टको जीवन देखेर मलाई प्रभाव पार्यो । मैले येशूमा विश्वास गरि उहाँँको काममा आफूलाई अपर्ण गरेको छु ।
तपाईंंको स्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मैले गाएको गीतले मैले चलाएको कार्यक्रमहरू मन पराइदिनु भएको छ । सवैप्रति धेरै कृतज्ञा छु । अझ प्रभुको निम्ति धेरै काम गर्न योजनाहरू बनाएको छु । म योग्यको त थिइन तर परमेश्वरले योग्य बनाइ उहाँँँको राज्यको निम्ति चलाइ रहनु भएको छ ।
यसको लागि म परिवारप्रति धन्यवादी छु । तपाईंंको भएको ज्ञानवरदान पचिहान गरि उहाँँको निम्ति चलाउनुहोस् । परमेश्वरले तपाईंंलाई सहायता गर्नुहुन्छ ।
तपाईंंका भावि योजना के के छ ?
परमेश्वरले उहाँँको राज्य विस्तारको लागि यो आवाज दिनु भएको छ यही आवाजबाट उहाँँको महिमा गर्दैछु । बाचुन्जेल उहाँँको गीत गाइरहनेछु र उहाँँको वचन यसरी नै संचारमाध्यमबाट बोलिरहने छु ।
अन्तिमा मिडियाबाट केही गर्छु भन्ने योजना बनाएकाहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाबाट हामीले प्रभुको काम तिब्र गतिमा गर्न सक्छौं । यदि तपाईंं मिमियाकै निम्ति हो भने आफ्नो अडान पहिचान गरी प्रार्थनाको साथ अगि बड्नुस उहाँँले तपाईंंलाई उहाँँको महिमा गर्ने योग्यको बनाउनु हुनेछ ।
अन्तिममा केही भन्नु हुन्छ कि ?
जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदै परमेश्वसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनुहोस् । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न प्रार्थनासहित अगि बड्नुहोस् । एकदिन परमेश्वरले सफलता दिनुहुनेछ ।
फौजदारी संहितामा धर्मः कसुर र सजाय विधेयक सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम
२० भदौ २०७४, काठमाण्डौँ । गत साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक–२०७४ सम्बन्धमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले बेथशालोम पुतलीसडक चर्च काठमाण्डौँमा विभिन्न मण्डलीका पाष्टर तथा अगुवाहरु संघसंस्थाका प्रमुखहरुको वृहत जनसहभागितामा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम भव्यतका साथ सम्पन्न गरेको छ ।
महासंघका सचिव पा. तेज बहादुर रोक्काको कुशल संचालन र सह–अध्यक्ष डा. फिलेमोन क्षेत्रीबाट सुरुको प्रार्थना भएको उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व अध्यक्ष सि.बि. गहतराजले गर्नुभएको थियो भने विधायन समितका सदस्य एवम व्यवस्थापिका संसदका सांसद माननीय रामनारायण बिडारीज्यूले प्रमुख आतिथ्यता र कार्यक्रमको दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गर्नुभएको हो । साथै अतिथिहरुमा मुस्लिम समुदायका अध्यक्ष खुसिद् आलम, वानी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. समित अहम्मद, फ्रिडम फर अलका सचिव मानवअधिकारकर्मी खगेन्द्र ओली, संविधानविद् अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी लगायत महासंघका पदाधिकारीहरु मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा आशिष मण्डलीका यूवाहरुले स्वागत नृत्य प्रस्तुत गरी आतिथिहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने महासंघका महासचिव पा. पदमनाथ पराजुलीले मञ्चमा आसिन अतिथिहरु र उपस्थित सम्पुर्ण पाष्टर तथा अगुवाहरुलाई स्वागत सहितको मन्तव्य राख्नुभएको थियो । त्यसैैगरी महासंघका उप–महासचिव तथा प्रवक्ता पा. सागर बँैजुले कार्यक्रमको संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो सो कार्यक्रमका सहजकर्ता संविधानविद् अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीज्यूबाट फौजदारी संहितामा धर्मः कसुर र सजाय सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै त्यस विषयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो । अधिवक्ता रेग्मीले नेपालको संविधान धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः १ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफनो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता भएकोले सबैले आफनो धर्म मान्न, अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउने कुरामा विश्वस्त रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो साथै नेपालको फौजदारी संहिता फ्रान्सको नेपोलियन संहिता भन्दा ४२५ वर्ष पुरानो कानुन रहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय रामनारायण बिडारीले अहिले पारित भएको विधयेक धार्मिक समुदायहरुको लागि सजाय दिनको लागि नभई संरक्षणको लागि हो, यदि धर्मलाई राजनीतिले नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने त्यो पाइँदैन भनि बताउनुभयो । साथै यस विधेयक सँग कुनै पनि धार्मिक समुदाय् नबुझि नडराउन उपस्थित सम्पुर्णलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरि महासंघका अध्यक्ष गहतराजले कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो भने सल्लाहकार एलिया प्रधानले अन्तिम प्रार्थना गर्नुएको थियो ।
इसाई सांगीतिक कार्यकम २०७४ सम्पन्न
यही २०७४ भाद्र २० गते एक भब्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रेमनेन्ट मिडिया क्रियसनले आयोजन रहेको हो । आशा चर्च, कपनस्थित सो कार्यक्रमा कर्ण दास, राजेश राई, सृष्टि सुनार, सुस्मीता राई, राहुल बिश्वासले गीत सुनाएर थिए । एस पि रिभिलेशन समुह र सलिशा मगर, कृष्टीना राईले नृत्यद्धारा आफ्नो प्रस्तुति दिएका दिए । भने सोहि कार्यक्रममा कुमार अब्राहम र कुमार बर्देवाले भ्रस्टचार बिरुद्ध हास्य व्यङग्य गरेर दर्शकहरुलाई मनोञ्जन दिएका थिए । इसाई कलाकारिताप्रति सर्मपित मुख्य उद्देश्यका साथ केही वर्षदेखि शुरु भएको मिडियो हो । यस मिडियाबाट इसाई चलचित्र झल्केसमेत निर्माण भइसकेको छ ।
उत्साहजनरुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी आयोजक समितिबाट मेरो गड डट कमलाई गराउनु भएको छ । अव भाद्र २४ गते शनिवार २ वजे ललितपुर, सातदोवाटो स्थित स्तुती प्रशंसा मण्डली हुँदैछ ।